Shandong GP ka edeputara n’ime akwukwo ulo ihe ohuru ohuru nke ndi China nke ohuru na mpi ndi iteghete
N’abalị iri abụọ na anọ n’ọnwa Nọvemba, kachitere ọhụụ China na asọmpi azụmaahịa nke isii mechiri na mbabo. Azụmahịa ụlọ ọrụ a nwere ụlọ ọrụ 160 ga-akpọtụrụ aha, site na nyocha nke ọkara nke ụnyaahụ otu ụbọchị, ngụkọta nke ụlọ ọrụ 18 sitere na asọmpi ụlọ ọrụ ihe ọhụrụ a ga-akpọtụrụ aha na ụlọ ọrụ, banyere asọmpi mba kachasị elu. N'ime ha, enwere ụlọ ọrụ iri na abụọ na otu mmepe na ụlọ ọrụ isii na-arụ ọrụ mmalite. A hoputara Shandong GP ka imeputa ulo akwukwo ihe ndi ozo nke ndi China nke ohuru na mpi ndi iteghete.
Asọmpi a kwadoro usoro 8 + 7 nke nhọrọ nchekwa saịtị, nke ahụ bụ, ndị asọmpi ahụ na-abịa nkeji 8 na ndị ikpe na-ajụ ajụjụ maka nkeji 7. Onye ọ bụla na-asọ mpi ga-enweta akara site n'aka ndị ikpe asaa. Mgbe iwepu akara kachasị elu na nke kachasị ala, akara nke ndị ikpe ise ndị ọzọ ga-abụ akara ikpeazụ.
Sheng yanlin, onye osote onye isi ụlọ ọmalịcha nke ngalaba sayensị na teknụzụ, kwuru n'ememe nturu ugo a: “Ihe omume ụlọ ọrụ ọhụrụ a bụ ọrụ ikpeazụ nke asọmpi a. N'afọ a, ndị isi kansụl steeti ahụ enwetala nkwado nke ọma na nkwado nke etiti, ngalaba na - ahụ maka sayensị na teknụzụ n'ogo niile, na ọtụtụ ndị ọchụnta ego enwetala ezigbo nzaghachi. Asọmpi a akwadola ọtụtụ nnukwu ụlọ ọrụ maka ijikọ na asọmpi a, ma kwadokwa nnukwu ụlọ ọrụ abụọ ka ha buru ụzọ na ịme asọmpi ọkachamara. Enwere ike ikwu na asọmpi ahụ achọpụtala ụzọ dị ukwuu iji kwalite mmepe nke ụlọ ọrụ nnukwu, obere na ọkara. Ekwere m n’eziokwu na ndị ọchụnta ego na ndị si n ’ụdị ọrụ ọ bụla ga-anọgide na-elebara ma na-akwado asọmpi China na asọmpi ọchụnta ego ma na-eme ka ọ dị mma na ọdịnihu.”
Oge nzipu ozi: Apr-08-2020